ကန့်သတ်နာရီ ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး ကန့်သတ်နာရီ မှအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်
ပုံစံ - Limited Designer Style-Silver White
irregularular လိုင်းငွေ dial အပေါ်လွတ်လပ်စွာလွှဲ,ဒီဇိုင်နာ၏လွတ်လပ်မှုကိုသင်္ကေတ.
နှင်းဆီနှင့်အတူ-ပုံဖော် Case နှင့်အဖြူရောင်ကြွေသိုင်းကြိုး,အပန်းဖြေမှုမှာလှပမှုကိုပြသနိုင်ပါတယ်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.designwatches.com.tw/my/limited-watches.html
Xing Heart Enterprise Partnership ဦးဆောင်သည် Taiwan ၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ ကန့်သတ်နာရီ, အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိတဲ့ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းနဲ့အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်ပြီးသော။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတောအတွင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူအသင်းများထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်တို့ထက်သာလွန်ထုတ်ကုန်သေချာထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးဖတ်ရတယ်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသည့်ပစ္စည်းများနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာယန္တရားနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ခေတ်ပြိုင်စတိုင်များခရီးဦးကြိုပြုခြင်းနိုင်ပါတယ်။
အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသောအကောင်းဆုံး ကန့်သတ်နာရီ ပြုလုပ်သူ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အချိန်အတော်ကြာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့ကျင့်ပေးပါသည်။ ကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖြစ်ကြသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများပေးကတိပေး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖောက်သည်များနှင့်ရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်ကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်, ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
အကောင်းဆုံး ကန့်သတ်နာရီ ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် ကန့်သတ်နာရီ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူ၊ Taiwan
စတိုင်မိတ်ဆက်ခြင်းကိုကြည့်ပါ အဆိုပါအနက်ရောင်အဆုံးမဲ့မူးယစ်ဖြစ်ပါတယ်,နှင့်အချိန်ဘဏ္asureာကို box ကိုတခုခုပေါ်ထွက်လာ အနက်ရောင်,အပြတ်အသတ်နက်ရှိုင်းသောအနက်ရောင်,တိတ်ဆိတ်တဲ့အခိုက်၌ရှိသကဲ့သို့,သင့်ကိုအဆုံးမဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြောပြပါ.အဆိုပါပွတ်အနက်ရောင်ဒီဇိုင်းကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်နှင့်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ထားထုတ်တတ်၏,၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် texture နှင့်ကြော့ရှင်းသည်.တွဲဖက်ငွေ-လက်ဖြူတို့သည်မှောင်မိုက်သောညတွင်လရောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏,နှင့်အချိန်ဘဏ္treာကို box ကို၏ခရီးစတင်ခဲ့သည်,တိတ်ဆိတ်နှင့်မူးယစ်.သို့သော်,ညသန်းခေါင်သည်နေ့၏အဆုံးကိုမဆိုလိုပါ,ကနေ့ရက်တိုင်းရဲ့အစကိုပုံဆောင်သည်. ထိုကဲ့သို့သောနေ့ရက်ကာလ၌,မင်းနှလုံးသားထဲမှာသိုဝှက်ထားခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေ,သို့မဟုတ်အချိန်ကြာမြင့်စွာမြတ်နိုးခဲ့ပြီးသောဓာတ်ပုံ,နာရီရဲ့နောက်ကျောမှာထွင်းပါ,သွေးခုန်နှုန်းအနီးဆုံးနေရာ,သင်နှင့်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူအရေးကြီးသောအချိန်တိုင်းတွင်သွေးခုန်နှုန်းကိုမြန်စေနိုင်သည့်အရာများနှင့်အတူလိုက်ပါပါ.နက်ရှိုင်းသောစိတ်နှလုံးသည်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်အပေါ်နက်ရှိုင်းစွာရိုက်နှိပ်ခံရလိမ့်မည်. အဆိုပါ Matte texture မျက်နှာပြင် 12 နှင့်ကိုက်ညီနေသည်.6.9 ခွက်စကေး.ခြုံငုံအရောင်အဓိကအားဖြင့်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်.အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးလေထုနှင့်အနိမ့်သည်-သော့နှင့်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း.သင်၏စိတ်ထားနှင့်ခံစားချက်ကိုမြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်. ▲နာရီအရွယ်:၃၆ မီလီမီတာ/41mm ▲မျက်နှာပြင်အရောင်:အဖြူ/အနက်ရောင် ▲pointer:တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ် လှုပ်ရှားမှု:လင်းကျောက်လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ရပ်မှန်ပစ္စည်း:သံမဏိ 316 ဖန်ခွက်:နီလာမှန် သိုင်းကြိုး:သံမဏိ/သားရေ မျက်နှာပြင်အချင်း:၃၆ မီလီမီတာ/41mm မျက်နှာပြင်အထူ:၇.၁ မီလီမီတာ/7.၂ မီလီမီတာ ကြိုးအရွယ်အစား:၁၆ မီလီမီတာ/၂၀ မီလီမီတာ ရေစိမ်ခံသော:ရေစိုခံ 3ATM အမှတ်တံဆိပ်မူလအစ:ထိုင်ဝမ် မျက်နှာပန်းကန်၏အရောင်,နာရီ၏အိတ်နှင့်သိုင်းကြိုးကိုလွတ်လပ်စွာကိုက်ညီစေနိုင်သည်.စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပါ:စိတ်ကြိုက်နာရီလက်｜နောက်ကျောအဖုံးလေဆာရောင်ခြည်｜Custom Watch Dials